Xukuumadda Soomaaliya oo ka faa'idaysanaysa khilaafka sii baahaya ee al-Shabaab - Sabahionline.com
Xukuumadda Soomaaliya oo ka faa'idaysanaysa khilaafka sii baahaya ee al-Shabaab
Waxaa qoray Cadnan Xusen oo Muqdisho jooga
Xukuumadda Soomaaliya ayaa si dhow ula socota khilaafka sii waynaanaya ee ka dhex jira hoggaanka al-Shabaab, iyadoo wacad ku martay in ay ka faa'idaysanayso daganaasho la'aantan, ayna xoojinayso ololoheeda militari ee kadhanka ah al-Shabaab ee hadda socda.
Maajo 16-keedii, wareysi uu siiyay talifishinka Somali Chanel, ayuu hoggaamiyaha sare ee al-Shabaab Sheekh Xasan Dahir Aweys (midig) ku eedeeyay amiirka Kooxda Axmed Godane kali-talisnimo. Xagga sare waxaa ka muuqda Aweys oo la hadlaya qof aan la aqoon 2010-kii markii kooxdiisa Xisbul Islam ay ku biirtay al-Shabaab. Labada koox ayaa kala jabay labo sano kadib. [Stringer/AFP]
Wadaad Kenyan ah oo ku baaqay in la dilo xubnaha al-Shabaab ee ka horyimaada hoggaanka
Godane oo awoodo shisheeye ku eedeeyay kala jajabka al-Shabaab, kuwa ka go'ayna naqdiyay
"Dagaalka lagu hayo al-Qaacidda iyo kooxda al-Shabaab waa uu sii socon doonaa ilaa inta gabi ahaanba laga tirtirayo oo laga burburinayo," ayuu Sabahi u sheegay Wasiiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Cabdikariim Xuseen Guuleed.
"Dagaalyahanada al-Qaacidda iyo xagjiriinta al-Shabaab waxa ay ku xiranyihiin xabsiyadeena, kooxaheenna ammaankuna si dhow ayay ula socdaan xubnaha maleeshiyada iyo taageerayaasha kooxdan ee bilaabay in ay kusoo laabtaan caasimadda," ayuu yiri.
Guuleed ayaa sheegay in tiro badan oo xubnaha al-Shabaab ah oo hubka iska dhigayay kusoo laabanayaan Muqdisho si ay qoysaskooda iyo qaraabadooda ula noolaadaan kadib markii kooxda ay ku guul darreysatay in ay hesho taageerada shacabka.
"Inta badan xubnaha kooxdan waxa ay hadda usoo noqday damiirkii, waxaana ka dhaadhacday in ka bar bar dagaalanka al-Qaacidda si loo dilo Soomaali aan waxba galabsan iyo burburinta dalkooda aysan aheyn wax sax ah," ayuu yiri Guuleed.
Aweys: Godane waa 'amiir kibray oo kaligi taliye ah'
Khilaafka sii baahaya ee kadhex jira hoggaanka al-Shabaab ayaa sababay in tiro sii kordhaysa oo ka titrsan hoggaamiyayaasha sare ee ururka ay labadii bilood ee lasoo dhaafay si furan u dhalleeceeyaan hoggaamiyaha kooxda Axmed Cabdi Godane, oo sidoo kale loo yaqaano Mukhtar Abu Subeyr.
Tusaalihii ugu dambeeyay, ayuu hogaamiyaha sare ee al-Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys waraysi uu khadka telefoonka ku siiyay telefishanka Somali Chanel 16-kii May waxa uu si adag u dhalleeceeyay Godane.
Aweys ayaa Godane ku eedeeyay kali-talisnimo, isagoo af-duubanaya kooxda si uu u fidiyo awoodiisa, si indho la'aan ahna isaga maahinaya fikradaha hoggaamiyayaasha al-Shabaab.
"Militari ahaan ayaa naloo wiiqay, waxaanuna ka baxnay magaalooyin waaweyn, iyadoo ciidamadeenna ay u kala jajabayaan kooxo. Dhammaan arrintan waxa ay ku dhacday hoggaamiyaha kooxda oo qaatay go'aano isaga ku khaas ah," ayuu yiri Aweys.
"Ciidamada xukuumadda Soomaaliya ayaa qabsaday aagagga aan kasoo baxnay, waana taa sababta ay awoodooda iyo saameyntooda ay si xooggan ugu korortay," ayuu yiri. "Waannu iskhilaafnaa, mararka qaar waannu is dagaalnaa, waxaa naga dhex dhaca kala duwanaasho xagga fikirka ah taa oo mabaadi'ideena Maxamadiyada ah kudhex walaaqday asaaliibta Maykaafiiliga iyo siyaasado khaldan oo uu hoggaamiyahan raacayo, kuna salaysan dilid, dhaawicid, gaajeeyn iyo in muhaajiriinta [dagaalyahanada shisheeye] lagu tuuro xabsiyo qarsoon,"
"Maxaa dagaalyahannadan [shisheeye] loo beegsanayaa maadaama ay dhul fog dalkeena uga yimaadeen in ay difaacaan Islaamka iyo Muslimiinta?" ayuu Aweys weydiiyay.
Aweys, oo ah mid kamid ah aasaasayaasha iyo hoggaamiyaha kooxda xukuumadda kasoo horjeedda ee Xisbul Islaam taa oo ciidamadeeda ku biirisay al-Shabaab 2010-kii, ayaa sheegay in hoggaaminta Godane ay al-Shabaab bannaysatay daadinta dhiigga Muslimiinta aan waxba galabsan, iyagoo ugaarsanaya mucaaradkeeda iyo kuwa naqdiya, iyagoo sidoo kale dilaya culimada caanka ah ee Soomaaliya.
Aweys ayaa ku booriyay dagaalyahanada al-Shabaab in ay iska ilaaliyaan qaadashada amarka ay siiyaan ammiirrada ku baaqaya in la dilo shacabka aan waxba galabsan, toogashada xubnahooda ama beegsiga lagu hayo hoggaamiyayaasha kale ee al-Shabaab, taa oo uu sheegay in ay horseedi karto rabshado dhexdooda ah.
"Waxaan shaaca ka qaadayaa in aan ka dhiidhinayno awoodda kaligi talisnimo ee ammiirka, kaa oo samaynaya go'aano nafsaddiisa u adeegaya oo kasoo horjeeda shareecada Islaamka," ayuu yiri, isagoo ula jeeda Godane. "Amiirka noocan oo kale ah ee aan qaadaneyn talo iyo waano iyo go'aan qaadashaada talo la'aanta; waa qof dhagaysanaya codkiisa oo kaliya qancinaya rabitaankiisa, isagoo adeegsanaya siyaasad ciqaab ah si uu u ilaashado booskiisa si awood sheegasho ah."
Khilaafka al-Shabaab kadhex jira oo halkii ugu sareysay gaaray
Al-Shabaab ayaa ku sugan xaalad aad halis u ah iyadoo hoggaamiyayaasheeda iku hayaan weerar, islamarkaana isku dayaysa in ay la dagaallanto xukuumadda Soomaaliya iyo xoogagga isbahaysiga ah, ayay tiri Jamaad Sahal Khaliif, oo ah dhaq dhaqaaqe la shaqeeya Iida, oo ah urur maxali ah oo xoogga saara dhaqan celinta dhalinyarada.
Muranka kadhex jira Godane iyo hoggaamiyayaasha ajaanibta ah ee kooxda waxa uu gaaray halki ugu sareysay, ayay tiri Jamaad, dagaalkan ka dhex jirana waxa uu ugu dambeyn burburin doonaa kooxda.
"Waa in ay wada dhintaan si Soomaaliya ay ugu raaxeeysaato nabad iyo barwaaqo, ayna mar kale u noqoto barta ganacsiga Bariga Afrika, si markaa aan uga baxno guriga faqriga ah, una baxno barwaaqo, farxad iyo raaxo," ayay u sheegtay Sabahi.
Dadka Soomaaliyeed waxa ay diideen in ay taageeraan argaggixisada al-Shabaab iyo xukunnadooda aan caddaaladda ku fadhin iyo sidoo kale toogashada shacabka aan waxba galabsan ee diiday in ay raacaan xukunnadooda, ayuu yiri falenqeeyaha siyaasadda Faysal Ibraahim Nuur, oo sidoo kale cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho.
"Al-Shabaab waxa ay isku dayeeysay in ay baraaraha ummaddena u rogto ilmeeyn tan iyo markii kooxda ay dhalatay, oo ay isku beertay qeybo kamid ah Soomaaliya," ayuu Nuur u sheegay Sabahi.
Waxa uu sheegay in xukuumadda ay kala dambeyntii iyo noloshii caadiga ahayd kusoo celisay Muqdisho, Marka, Jowhar, Beledeweyne iyo Baydhaba, waxa ay sidoo kale hagaajisay ammaanka magaalooyinka kale ee ay xukunto.
"Waxaan xukuumadda Soomaaliya ugu baaqayaa in ay sii waddo dagaalkeeda isballaarinta ah ee qeybaha kale ee dalka [ee wali gacanta ugu jira al-Shabaab] si markaa ay dalkeena uga saarto kuwa dadka gaalaysiiya," ayuu yiri Nur.
Fadhili J. Lyamuya
May 29, 2013 @ 08:15:19AM
Waxaan xukuumada Soomaaliya iyo bulshada caalamkaba ku amaanayaa dadaalka ay ugu jiraan inay Soomaaliya ka xoreeyaan waxshinimada kooxda al-Shabaab. Nabada iyo horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya waxaa keeni doona dadka Soomaaliyeed laftooda. Waa in la gaadhaa wakhtigii la is ixtiraami lahaa ee la ogaan lahaa inaysan cidina cid ka bini’aadamnimo badnayn. Dhiigiina ha u daadinina colaad ay tiro yar oo dad ahi wadaan awgeed, dadkaasoo ah kuwo uu damac ka hayo awood haynta talada, balse kusoo gabanaya diinta. Waxaan ilaahay ka baryayaa inay Soomaaliya hesho nabad iyo xasilooni. Ilaahay Soomaaliya ha siiyo nabadgalyo waarta.